Digniin khiyaano ah oo u isticmaasha abaalmarinta Google sidii sed | Androidsis
Googled | | Noticias, Amniga
Khiyaano cusub ayaa ku wareegaysa internetka iyadoo la adeegsanayo a Abaal marin google ah sida seddexaad ee adeegsadayaasha inay wax qaniiyaan. Sida ay soo wariyeen Qaybta Gobolka ee Dembiyada Elektiroonigga iyo Kombuyuutarka ee Mexico, dhowr isticmaale ayaa maamulka ku wargaliyay soo saarista emayl been ah oo ka socda Google halkaas oo lagu hubinayo in qofka qaata uu helay abaalmarin.
Si kastaba ha ahaatee, Google ma qaybin wax abaalmarino ah dhawaan. E-maylka ayaa sheegaya in abaalmarinta ay u qaybiso mashiinka raadinta munaasabadda sanadguuradeeda (wax gebi ahaanba been ah, tan iyo markii Google ay billowday inay shaqeyso hal Sebtembar) waxayna xaqiijineysaa in isticmaalaha uu ku guuleystay abaalmarintan si kadis ah.
Si kastaba ha noqotee, midkoodna Google wuxuu qaybinayaa abaalmarino ama wuxuu qaadayaa nooc kasta oo imtixaanno ah. Fariintani waxay ku saabsan tahay khiyaano phisingmaaddaama farriintu ka codsaneyso dadka qaata inay la xiriiraan madaxa dhaqaalaha ee shirkadda oo ay diraan lacag si hormaris ah. Tan, khiyaanooyinka waxay ku maareeyaan inay gacanta ku dhigaan xogteena shaqsiyadeed oo ay xadaan lacagteenna.
Marka hadda waad ogtahay, haddii aad hesho emayl sidan oo kale ah, ha ka jawaabin ama ha soo bandhigin wax macluumaad ah oo shaqsiyeed oo adiga kugu saabsan Google Ma qaybinayso nooc kasta oo abaalmarin ah, waa khiyaamo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Digniin khiyaano ah oo u isticmaasha abaalmarinta Google sidii sed
Ku jawaab k4x30x
Waxaan helay ogeysiis ah inaan ku guuleysto kooxda abaalmarinta dhiirrigelinta Google xiriirkuna waa Brianhookson@yeah.net, Waxaan dareemayaa inay khiyaano tahay
Jawaab Martín García Reyes
Maxaad sameysaa haddii aad siiso xogtaada?
Waxaan siiyay xogteyda
Ku jawaab Gise
Maxaan sameeyaa? Waxaan siiyay xogteyda
Waxaan baaraya internetka waxayna ii soo direen xayeysiis Google ah oo ay tahay inaan ka jawaabo 3 su'aalood si aan ugu guuleysto abaalmarin.
Waxay codsadaan macluumaad sida: taleefan iyo cinwaan
Ka waran haddii aan iyaga siiyo?
Waxaan siiyay macluumaadkeyga aadna waan u baqayaa, xisaab bangi kuma lahan Mexico sidaa darteed waxaan rabaa ama iga caawinayaa fadlan.
Maxaan sameeyaa Fadlan ii sheeg inaysan joojin oohinta walwalka dartiis
Waan yarahay oo hooyaday ayaa i bartay inaanan ku dhicin ciyaarahaas ... nasiib badanaa inaanan xiisayn xD
Ku jawaab Rose
IPhone 8 oo ka mid ah $ 53.000 ayaa loogu talagalay fariinta sida ay tahay .. Waxaan u maleynayaa inaysan amaan aheyn oo la dirayo. $ 1
Waxaan u maleynayaa inaysan quseynin ... marka aadan wax ku iibsanin khadka tooska ah ee kaarkaaga ...
Kuwii dhacay waa wada dumar, hunguri xumaa !!!!
Ka jawaab lab
Maxay sameeyaan markay xog bixiyaan ???????
Maanta Sebtember 10, 2020 waxaan ka helay Google inaan ku guuleystay iPhone 11… Iyo inaan galo emaylkeyga si aan u soo furto abaalmarinteyda yo .waxaad siisay xogteyda… maxaa dhacaya?
Jawaab Aída Lorena Olmedo
Muuqaalka OPPO ee Raadinta 9 daadin, taleefan la imaan doona cufka Snadpragon 810 iyo 4GB RAM